Ehelada Suxufiyiin ku geeriyooday Qaraxii soobe oo deeq lacageed la gaarsiiyay | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ehelada Suxufiyiin ku geeriyooday Qaraxii soobe oo deeq lacageed la gaarsiiyay
Ehelada Suxufiyiin ku geeriyooday Qaraxii soobe oo deeq lacageed la gaarsiiyay
Muqdisho (SONNA) Deeqdan lacageed ayaa loo qeybiyey ehelada Suxufiyiin ku geeriyooday qarixii ka dhacay 14 October isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho, iyadoo lacagtaan ay soo dhiibtay hay’adda Free Press oo fadhigeedu yahay wadanka Holand.
Suxufiyiinta geeriyootay ee maanta eheladooda lacagta la gaarsiiyey waxaa ka mid ah allaha u naxariistee Cabdulaahi Cisman Faarax oo ka howlgali jiray idaacadda Maandeeq iyo Cali Nuur Siyaad oo u shaqaynayey Voa, iyadoo qoys waliba la siiyey lacag dhan 1500 oo dollar.
Sidoo kale waxaa lacag iyana la siiyey Suxufiyiin ku dhaawacmay qaraxaasi kuwaas oo uu ka mid ahaa Maxamed Cumr Baakaay
Markii ay soo gaba gabowday lacag bixinta ayaa waxaa saxaafada la hadlay xoghayaha guud ee Ururka Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Macalimuu oo u mahad celiyay Hay’adda Free Press oo u soo gurmatay Suxufiyiinta waxyeelada ka soo gaartay qaraxii Soobe.
Maalmihii dembe waxaaa socday gurmad loo fidinayey ehelada dadkooda ku waayey qarixii ka dhacay isgooska 14 october ex soobe ee magaalada Muqdisho.
Previous articleMadaxweynaha oo ka tacsiyeeyey geeridii Marxuum Xildhibaan Axmed Cashara
Next articleGuddoomiye Jawaari oo shacabka Suudaan ugu hambalyeeyay cunqabateyntii uu Mareykanka ka qaaday